Misy amin’izy ireo no tsy mampiasa “vitrine” fa mampirantiranty ny sakafo izay amidiny. Misy ireo mampiasa sarony ary ny hafa manasarona ny azy
amin’ny selofanina. Mampiasa latabatra ireo mpivarotra sakafo masaka etsy Anosy sy Mahamasina
ary Andravoahangy. Misy manao ny sakafony ao anaty “vitrine”, misy mametraka ny azy eny ambony latabatra, ka tongavan’ny lalitra sy ny vovoka ary ny fako manidina entin’ny rivotra. Ho an’ireo mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana dia normaly, hoy izy ireo raha mampiasa “vitrine” na saronana ny sakafo amidy, nefa ilay mibata mivoaka miditra an’io vitrine io no tsy mety
amin’izy ireo. Zara raha mandeha ny tsena amin’izao, nefa mbola handoa ny karaman’ny mpibata entana, hoy ny sasany tamin’izy ireo. An-kilany, tsy misy fiantraikany amin’ireo mpajifa ny sakafo hohanina, satria efa misy zatra izany izy ireo. Mpivarotra hani-masaka sivy no eny Andravoahangy
ary 500 ariary ka hatramin’ny 1.000 ariary dia afaka misakafo. Nambaran’ireto mpivarotra fa misy polisy kaominaly sy avy eo anivon’ny BMH no manao fitsirihana in-droa isan-kerinandro eny amin’ireo toerana voalaza etsy ambony. Nanamafy tamin’ireto mpivarotra, ireo polisy, fa tokony hadio lalandava ny sakafo amidin’izy ireo ary tokony hampiasa fitaovana fiarovana amin’ny loto
maro samihafa. Ny mpitsabo tao amin’ny trano fameloman’aina ao amin’ny Hjra na Reamed, dia nilaza fa tokony hitandrina mandrakariva izay fahadiovany izay, ireo mpivarotra amoron-dalana, mba tsy ho azon’ny loto ny sakafo amidin’izy ireny, fa lasa mankarary kibo. Nambaran’io mpitsabo io fa tokony hampiasa sarony ireo mpivarotra ary tsy atao tratry ny vovoka na loto hafa. Tokony ho rano madio lalandava no ampiasain’izy ireo ary mitandro izay fahadiovana izay. Raha sanatria ka marary vokatry ny fihinanana sakafo an-dalambe ny mpajifa dia tokony hamonjy dokotera na toeram-pitsaboana aorian’ny fihinanana ilay sakafo.